Amaqhinga kuWhatsApp atya idatha encinci yeselfowuni | I-Androidsis
Uyenza njani i-WhatsApp itye idatha encinci yeselfowuni
I-WhatsApp yenye yezona zicelo zithandwayo kwaye zisetyenziswa ngabasebenzisi kwi-Android. Ii -apps zemiyalezo ezinje ngale zihlala njengeyona datha yeselula elambileyo. Ngethamsanqa, sinamaqhinga athile aya kusivumela ukuba sinciphise ukusetyenziswa kwedatha ngelixa sisebenzisa usetyenziso. Ke, ukuba unenqanaba eliqingqiweyo, awuzukuba nexhala kakhulu malunga nokusetyenziswa kwesicelo.
Ukongeza, kwezinye iinkqubo sikwanethuba lokusebenzisa indlela yokugcina idatha, njenge Facebook o Instagram. Kodwa namhlanje sigxila kuyo la maqhinga okonga idatha kwi-WhatsApp. Zonke zilula kakhulu, vele uqwalasele imiba ethile kwi-app ngokwayo.
1 Guqula umgangatho weefowuni
2 Khubaza ukhuphelo oluzenzekelayo ngedatha yeselula
3 Izicwangciso zokugcina
3.1 Olunye uqeqesho olunomdla:
Guqula umgangatho weefowuni
Enye yezinto zokuqala esinokuzenza kwi-app yile lungisa umgangatho weefowuni ngokufanayo. Ukwenza oku, xa isicelo sivulekile emnxebeni, siklikha kumanqaku amathathu athe nkqo akwicandelo eliphezulu lasekunene kwesikrini. Ukusuka kukhetho oluboniswe kwiscreen, singena kuseto lwesicelo.
Ngaphakathi kuseto lweWhatsApp singena kwicandelo ledatha kunye nokugcina. Kukweli candelo apho sifumana khona imisebenzi ebhekisa ekusetyenzisweni kwedatha kwisicelo. Ke kulapho apho siya kuba nakho ukumisela iinkalo ezininzi ngendlela elula. Xa singena kweli candelo, sijonga ezantsi kwesikrini.
Apho sifumana ukhetho olubizwa "Nciphisa ukusetyenziswa kwedatha", ecaleni kwebhokisi esinokuyijonga. Ngokuzenzekelayo iyakhangelwa, ke into ekufuneka siyenzile kukungayiqwalaseli. Ngale ndlela, ukusetyenziswa kwedatha kuya kuncitshiswa, nangona umgangatho weefowuni uza kuba mbi. Kodwa ukuba awusebenzisi eli nqaku, awuyi kuba neengxaki emva koko.
Khubaza ukhuphelo oluzenzekelayo ngedatha yeselula
Okwesibini, elinye iqhinga elilula esinokuthi siligcine kwinqanaba lethu ledatha xa usebenzisa i-WhatsApp, kukhubaza ukhuphelo oluzenzekelayo ngedatha yeselula. Ngokuzenzekelayo, xa besithumela ifoto, ividiyo okanye ifayile kwifowuni yemiyalezo, sinomsebenzi wokuzikhuphela ngokuzenzekelayo kwifowuni. Kodwa le yinto esinokuyiguqula ngokulula.
Kwakhona, siqala ngokunqakraza kumanqaku amathathu athe nkqo phezulu kwaye emva koko ukhethe useto ukhetho, phakathi kwezo zibonakala kolo luhlu. Nje ukuba sibe ngaphakathi kuseto lwesicelo, singena kwicandelo ledatha kunye nokugcina. Kuba kulapho unokumisela khona yonke lemiba yokusetyenziswa kwedatha yesicelo sakho.
Ngaphakathi apho Sifumana icandelo elibizwa ngokuba yi-Automatic download. Sinomdla kwicandelo lokuqala lalo, ekunokwenzeka ukuba lixhume kwidatha yeselfowuni. Emva koko nqakraza kwicandelo. Ukwenza njalo kuvula iwindow entsha ngeendlela ezahlukeneyo (iifoto, ividiyo, iaudiyo, amaxwebhu). Into ekufuneka siyenzile kukungabakhangeli bonke. Kwaye emva koko siyinika ukuba yamkele.
Kwenzeka ntoni xa sisenza oku? Sixelela isicelo ukuba xa sidityaniswe nenqanaba ledatha yethu, sukukhuphela ngokuzenzekelayo nayiphi na ifayile osithumela yona. Ke ngoko, idatha ayinakusetyenziswa xa omnye wabafowunelwa esithumela ifayile kwi-app. Ke, sinokukhetha into esifuna ukuyikhuphela ukuba basithumelela into. Isivumela ukuba sigcine ngokulula kwiqondo lethu ledatha, ukongeza ekubeni sikwazi ukukhetha kuyo yonke into abafowunelwa bethu abasithumela kuyo kwi-app.
Okokugqibela, elinye iqhinga esinokulisebenzisa kukwenza uhlengahlengiso kwii-backups zesicelo. Ukwenza oku, singena kuWhatsApp kwaye ucofe kwakhona kumanqaku amathathu athe nkqo avela kwicala lasekunene lesikrini. Xa sikuseto, singena kwicandelo leChats. Apha sinokhetho olunokuthi silutshintshe ukugcina idatha kwi-app yemiyalezo.
Ngaphakathi kweli candelo singena kugcino. Ngokuzenzekelayo, isicelo senza iikopi kwiakhawunti yakho yeGoogle Drayivu, xa kunokwenzeka into ethile, ungasoloko ufumana iingxoxo onazo. Nangona ezi kopi zisebenzisa inxenye yomrhumo wedatha yomsebenzisi. Xa singaphakathi kwicandelo elilalela, kufuneka siye ezantsi.
Apho sifumana icandelo elibizwa ngokuthi "gcina usebenzisa". Sinqakraza kuyo kwaye iya kusinika ithuba lokukhetha indlela esifuna ukugcina ngayo ezi kopi ze-WhatsApp. Ingcebiso yokonga idatha kukuba sikhethe i-WiFi kuphela. Ngale ndlela, i-backups iya kwenziwa xa uqhagamshele kwinethiwekhi ye-WiFi kuphela.
Singaliguqula kwakhona rhoqo ezenziwe ngazo, kodwa oku sele kunganyanzelekanga, kuxhomekeke kuwe. Kuba kuzakubakhona abasebenzisi abafuna ukwenza iikopi rhoqo.
Ungayidlulisa njani incoko kaWhatsApp ukusuka kwifowuni enye ukuya kwenye
Uyenza njani inkqubo ye-WhatsApp yokuthumela imiyalezo ezenzekelayo. (Inyathelo ngenyathelo lesifundo sevidiyo)
Indlela yokuqwalasela izaziso kwi-WhatsApp
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyenza njani i-WhatsApp itye idatha encinci yeselfowuni